Izindaba - Izindlela zokulungisa ezivamile ze-plastic extruder
Inqubo yesondlo ye-plastic extruder ngokuvamile ihlukaniswe yaba ukugcinwa kwansuku zonke nokugcinwa njalo. Izinqubo ezimbili zesondlo ziyahambisana futhi zibalulekile. Umhleli olandelayo uzokwethula imininingwane edinga ukunakekelwa ekulondolozweni okuvamile kwe-single-screw plastic extruders:
1. Hlola njalo ukuthi izikulufo nezinye izinto zokubopha ebusweni beyunithi azikhululekile yini futhi uziqinise kahle ngesikhathi. Izinga likawoyela wokuthambisa webhokisi lokudlulisa kufanele lingezwe noma lishintshwe ngesikhathi (ukungcola phansi kwethangi likawoyela kufanele kuhlanzwe njalo). Emishinini emisha, uwoyela ngokuvamile uyashintshwa njalo ezinyangeni ezintathu, bese kuthi njalo ezinyangeni eziyisithupha kube unyaka. Isihlungi sikawoyela nepayipi lokudonsa kufanele lihlanzwe njalo (kanye ngenyanga).
2. Ukugcinwa kuka-gearbox we-single-screw extruder kuyefana noka-gearbox ojwayelekile ojwayelekile. Ikakhulu hlola ukuwohloka nokwehluleka kwamagiya namabhere.
3. Lapho ufaka kabusha, sicela uqaphele ukuthi izikulufo ezimbili u-A no-B kumele babe sezikhundleni zangempela futhi ngeke zishintshwe! Ngemuva kokuthi kufakwe inhlanganisela entsha yezikulufo emshinini, kufanele uqale uphendule imoto ngesandla. Uma ijikeleza ngokwejwayelekile, ingavulwa ngejubane eliphansi. Lapho isikulufa noma umgqomo ungasetshenziswanga isikhathi eside, kufanele kube nezindlela zokulwa nokugqwala nezokulwa nokungcola, futhi isikulufu kufanele simiswe. Uma ibhulokhi ishiswa ngomlilo, ilangabi kufanele lihambe kwesokunxele nakwesokudla, futhi lihlanzeke ngenkathi livutha. Ungashisi ikhanda lakho ngokweqile (okuluhlaza okwesibhakabhaka noma okubomvu), futhi ungafaki intambo emanzini.
4. Njalo ulinganise ithuluzi lokulawula ukushisa ukuze uhlole ukulungiswa kokulungiswa kwalo nokuzwela kokulawula.